USERENA WILLIAMS UKHULELWE, ULINDELE USANA KUNYE NESITHANDWA SAKHE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato USerena Williams ukhulelwe kwaye ulindele ukuba umntwana wakhe wokuqala abe nesithandwa nguAlexis Ohanian
USerena Williams ukhulelwe kwaye ulindele ukuba umntwana wakhe wokuqala abe nesithandwa nguAlexis Ohanian
USerena Williams ulindele umntwana wakhe wokuqala kunye nomlingane uAlexis Ohanian. (Ifoto nguJulien Hekimian / WireImage)
Ngu: Esther Lee 04/19/2017 ngo-11: 50 AM
Uyayibona kwakhona iReddit! Intshatsheli yentenetya USerena Williams ulindele umntwana wakhe wokuqala nge fiance UAlexis Ohanian .
umtshato wokuqala iingoma zomdaniso ilizwe
Umdlali we-tennis ophakamileyo ophezulu waya kwi-Snapchat ngoLwesithathu, ngo-Ephreli 19, ukuvakalisa iindaba zakhe zentsana. Iiveki ezingama-20, uWilliams 35, wabhala ecaleni kwefoto yakhe kwisuti yokuqubha kunye nokuqaqamba komntwana wakhe embonisweni.
USerena Williams ukhulelwe !! ❤️❤️ pic.twitter.com/u2RfhSzlcB
-UJarett Wieselman (@JarettSays) Epreli 19, 2017
Ube ngunyaka oneziganeko kwimbaleki kunye nomsunguli we-Reddit, iminyaka engama-33 ubudala, owabandakanyeka ngoDisemba. Ngelo xesha, u-Ohanian wayekhumbula ngokumangazayo uWilliams ngesindululo esothusayo eRoma.
Ndafika ekhaya. Kancinci emva kwexesha. Umntu ebephethe ibhegi endiphathele yona. Inqwelwana yalinda. Indawo: iRoma, wabhala ngexesha eqongeni. Ukuze ndikhaphe ndiye ‘kokuthandekayo’ kwam. Ukubuyela apho iinkwenkwezi zethu zaqala ukungqubana khona. Kwaye ngoku yayisisangqa esipheleleyo. Kwitafile enye saqala ukudibana ngamathuba.
Umphathi wezobuchwephesha wongeze ukusuka esiphelweni sakhe, (Wathi ewe.) Undicele ukuba ndimzobele into 'yexesha elizayo uNksk. Umgcini.
Ukuzisola kwam kuphela kukungabhekisi kum uzwane uxolo umqeqeshi uGarry
Iposi ekwabelwana ngalo nguSerena Williams (@serenawilliams) ngo-Epreli 17, 2017 kwi-6: 29 am PDT
Esi sibini kutshanje sonwabele uhambo lothando ukuya elunxwemeni, apho abaleke khona ezandleni zakhe. U-Williams wabelane ngeenkcukacha ezimbalwa malunga nokukhangela phambili ekucwangcisweni komtshato, nangona ukukhulelwa kwakhe ngoku kubaluleke kakhulu.
yintoni intsimbi yesithembiso
Ndihlala ndicwangcisa umsitho ngalo lonke ixesha, uSerena uxelele umboniso wase-Australia Iprojekthi . Ndenza imicimbi minyaka le. Ndenza yonke into ukusuka ekutyeni kuye ekubukekeni kuye kuyo yonke into… ndiyacinga, kubomi obahlukileyo, ndandingumcwangcisi womtshato. Okanye umcwangcisi womsitho nje.
'Ukutshata NguMama noTata' Isiqendu 4 Ukuphindaphinda: Umtshakazi Otshabalalisiweyo
Uvulindlela uMfazi uRee Drummond utyhila umhla oqhelekileyo woBusuku ngeLadd
Iindlela ezizezinye zokutya kwiDin-Down Dinner
Ukutshata ekubonweni kokuQala kukaNeil Bowlus: 'Bendinomdla kwiinzame zokudlala ngothando zikaSam'
Iikhitshi zamagcisa ezingama-37 ezineeKhabhathi eziMnandi
Umtshakazi uya kwiNtsholongwane emva koKwazisa uMfazi ngeNtombi: Funda iReddit Thread
UMelrose Indawo kaJosie Bissett Utshatile! Yabona Imifanekiso Yakhe Yomtshato Wokunqoba
I-40 entle yoyilo lweSunroom (Imifanekiso)
Uyenza njani ngokuchanekileyo iMitshato yokutshata kubantu abasandul 'ukutshata
UKate Middleton kunye neNkosana uWilliam baNdwendwela iHospital yaBantwana evulwe yiLate Princess Diana
Ukuphakanyiswa kwePatio vs Deck (i-Pros and Cons)
Iingoma ezingama-55 zoMdaniso woNyana oza kukunika zonke iimvakalelo
UMeghan Markle wayengenasilingo seMakeup ngaphambi koMtshato wakhe kunye neenkcukacha ezithe kratya ngobuhle bakhe bomtshato
Iindawo zokuTshata eziBalaseleyo e-Itali
izimvo zesipho seendwendwe zomtshato esinexabiso eliphantsi
Umama unyana udanisa iingoma zemitshato
amakhonkco akhe omtshato camo
iyintoni indima yencekukazi yimbeko
UJosh Lucas ngokuBakho kwe 'Sweet Home Alabama' Sequel: Ndingayenza ngeSibini
Imithi yePalm Potted kwiPatio yakho
'Inqanawa' yeNkwenkwezi uJerry Ferrara Utshata noBreanne Racano kuMnyhadala weRomial Evening